Halyeeyga Man United ee Gary Neville oo war naxdin leh u sheegay taageerayaasha kooxda Liverpool – Gool FM
(England) 15 Agoosto 2019. Halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa u arka in xiddiga kooxda Liverpool ee Maxamed Saalax uu ka tagi doono Reds dhamaadka xili ciyaareedkan.
Weeraryahanka reer Masar ayaa ka noqday kooxda Liverpool xiddig muhiim ah tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga AS Roma laba sano ka hor, wuxuuna door muhiim ah ee muuqda uu ka ciyaaray in Reds ay ku guuleysatay Champions League xilli ciyaareedkii hore.
Laakiin Gary Neville ayaa wuxuu rumeysan yahay in waayaha 27-jirkan ee garoonka ​​Anfield uu dhawaan soo idlaan doono, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa mar uu la hadlayay shabakada “BT Sport” isaga iyo halyeeyga Liverpool ee Jamie Carragher.
“Salah wuxuu ku bixi doonaa 12-ka bilood ee soo socota, waxaan taasi u arki karaa si dhab ah, laakiin Carragher ma dhihi karo. Waan arki karaa”.
Xiddiga reer Masar ayaa ku yimid kooxda Liverpool heshiis ku kacay 34 milyan ginni sanadkii 2017-kii, waxaana shaki ku jirin in ugu yaraan saddex jibaar qiimihii uu kaga soo dhaqaaqay Roma inuu kaga bixi doono Anfield xagaaga soo aadan.
Neville ayaa aaminsan in haddii uu baxo Maxamed Saalah ay wadada u xaareyso Manchester United in Liverpool ay ku garaacdo tartanka horyaalka Premier League.
“Waxaan kuu dammaanad qaadi karaa inta suurtogalka ah in Manchester United ay markale guuleysato, waxaa suurtogal ah inay ku guuleystaan Premier League, kahor inta aysan qaadin Liverpool”.
Warar badan ayaa sheegaya in Maxamed Saalax uu xiiseenayo inuu ku biiro kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, iyadoo ay ciyaartoy dhowr ah ee ka tagay Liverpool ay u dhaqaaqeen Spain, sida Luis Suarez, Xabi Alonso iyo Javier Mascherano, kuwaasoo dhamaantood guulo muhiim ah ku gaaray horyaalka La Liga, kaddib markii ay ka soo dhaqaaqeen Reds.
Kooxda Liverpool oo ku guuleystay koobka UEFA Super Cup kaddib markii ay rigooreyaal kaga adkaatay Chelsea... + SAWIRRO
Lampard oo ka hadlay guuldaradii ay xalay kala kulmeen Liverpool, muxuuse ka yiri N'Golo Kanté?